I-Radawa Hygge: i-SPA yabucala kwisitayile saseDanish
I-Radawa Hygge yindlu yendalo emoyeni weDanish hygge. Iya kuthandwa ngabo baxabisa ubumfihlo, isitayile saseScandinavia, i-chic, ivumba lehlathi (nge-iodine), ukukha amakhowa, ukuntyiloza kweentaka, ukhenketho lwebhayisekile, imililo kunye nokufumaneka komlambo ononxweme lwabucala. Inayo yonke into oyifunayo ukungcamla i-hygge yokwenyani. Simema abantu abasebenza bekude ukuba baxole noxolo, abacholi bamakhowa kunye neekhayiti, abantwana badlale ngesimbo sika "Bullerbyn", kunye nabalandeli beemoto zombane ukuba bahlawulise.
Njengoko singama-hedonists ngokwethu, siye saqinisekisa ukuba iRadawa Hygge ayiphelelwa yifenitshala entle kunye nezinto. Sigxininise kwiinkampani zasePoland naseDenmark, imibala yendalo yeRadawa (eluhlaza, enomhlwa, emnyama) kunye nezixhobo zokuqala ezivela kwiihambo zethu zaseDanish. Abalandeli bobushushu obufudumeleyo bayamenywa kwi-sauna yaseFinnish, emva koko unokuphumla ujonge igadi ekhanyisiweyo entle kunye ne-miscanthus engagungqiyo (ukususela ngoJuni ukuya kuNovemba).
IRadawa yenye yezona ndawo zintle kwaye zinomtsalane kubakhenkethi kwiPhondo lasePodkarpackie, elaziwa ngoxinzelelo olukhulu lwe-iodine emoyeni. Lilizwe lepine kunye namahlathi e-oki, apho unokuhlangana khona nemivundla, amaxhama, iimpungutye, ii-beaver kunye ne-squirrels. Lo mmandla uhlala liqela elikhulu leentaka ezidlulayo, iziqongqothwane, iingwamza, amabele, iijay kunye neekhetshe.
Iindawo ezikungqongileyo ziyakumema ukuba uqhelisele iindlela ezahlukahlukeneyo zokuzonwabisa. Ehlotyeni, unokukhwela ihashe, kwinqwelo, kwaye ebusika, ujabulele ukukhwela isileyi. Kukho iindlela zendalo kunye nokubona indawo kunye neendlela zebhayisikili kunye namanqaku olwazi malunga nendalo yendawo, izilwanyana kunye nomsebenzi wamahlathi ahamba emahlathini aseRadawa.
IRadawa Hygge yindlu elawulwa kude. Ukuba unayo nayiphi na imibuzo, sihlala sikhona! Bhala okanye usitsalele umnxeba kwaye siya kukunceda ngayo yonke into.